प्रधानमन्त्रि बनेपछि ओलीको नक्कली राष्ट्रवादको मुकुण्डो यसरी उत्रियो ! - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
प्रधानमन्त्रि बनेपछि ओलीको नक्कली राष्ट्रवादको मुकुण्डो यसरी उत्रियो !
प्रकाशित मिति : सोमवार, चैत्र १९, २०७४
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले बहुप्रतीक्षित अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको संयुक्त शिल्यानास गर्ने तय भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको राजकीय भारत भ्रमणका क्रममा २४ चैतमा नयाँदिल्लीको हैदराबाद हाउसबाट दुवै प्रधानमन्त्रीले आयोजनाको संयुक्त शिल्यानास गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच एकान्त वार्ता र औपचारिक वार्तापछि आयोजना हुने संयुक्त पत्रकार सम्मेलनअघि परियोजनाको शिल्यानास हुनेछ । १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ लागतमा परियोजना बन्न लागेको हो ।